Ubani nje nempela kithi ezijulile ngiseyingane wayiyeka nge emakhilayoni? Mhlawumbe ezimbalwa zalezi. Futhi namanje abanye abakholelwa ukuthi amapensela zemi- izingane ubuciko. Nokho, labo abacabanga kanjalo, mane nje akanandaba umdwebo njengoba enjalo. Eqinisweni, emapeniseli emibala - ithuluzi omkhulu ukudala imidwebo zinkulu, neze kunabayeni izinga lokukhanya kwazo ubuhle uwoyela imidwebo noma imidwebo iyashintsha iyaphupha ibe.
Namuhla, emakethe art ungathola eziningi brand ezihlukahlukene amapensela yabaculi abasha (kuhlanganise nezingane), kanye ochwepheshe. ukuthungwa yabo nombala zihluke kakhulu. Kukhona onzima ezithambile, angenisa ukukhanya futhi opaque, emifanekiso kanye iyashintsha iyaphupha ibe, futhi emapeniseli emibala, ukuvumelana kwezincwadi okusikhumbuza wax. Ngaphezu kwalokho, le palette color lemikhiqizo eziningi kumba eqolo. Kuhlanganisa hhayi kuphela imibala eyinhloko, kodwa futhi eziningi shades. Lokhu kukuvumela ukwenza isithombe njengoba namaqiniso ngangokunokwenzeka.
umdwebo amasu ezinemibala ipensela akuyona oyinkimbinkimbi kakhulu, kodwa sidinga kumaphesenti athile ukubekezela, ngoba ipensela mncane ayikwazi ngokushesha ngesineke phezu isifunda esikhulu iphethini ebusweni. Ngakho-ke kuhle ukuba kokubili soft futhi amapensela kanzima. Nge ezithambile ipensela ukuxubha ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, kuye amandla ngokucindezela, kungenzeka ukwenza ushintsho oluhle kusukela ocebile, umbala samehlo ezicashile, umbala okusobala. Ngaphezu kwalokho, imigqa ipensela ezithambile emva isicelo kungaba kalula ugaye ephepheni, udala umbala umfaniswano kanye letingamange tibe netihibe ngaphezulu komunye ithoni kwenye. Solid njengoba emapeniseli emibala zenzelwe umdwebo olunemininingwane ethe xaxa. Futhi ba kungasetshenziswa ukuthuthukisa umthunzi, uma kunesidingo. Kubalulekile njalo engaloli amapensela ukuhola bekulokhu abukhali njalo.
Zithandwa manje ukujabulela emifanekiso ngamakhrayoni. Babukeka njengezihlahla evamile, kodwa "iqhinga" wukuthi uma endaweni ukubopha lokufeza ethambile, oswakanyiswe amanzi, ukuxubha isixazululo lesi sakhi, futhi uthola umphumela emifanekiso yangempela. original kakhulu, engavamile futhi kahle wabheka isithombe, ngokuhlanganisa futhi izona nokushaywa unhlangothi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi drawing nge emakhilayoni cishe aqede kungenzeka ukulungiswa, ngakho kufanele uqaphele kakhulu. Kodwa namanje ingasetshenziswa ukususa ukukhubazeka encane irabha plastic. Ngokwesibonelo, uma endaweni ethile ngephutha ukhohlwe ukumaka gqamisa, ingasetshenziswa ukususa ngobumnene ingxenye sombala. Kodwa-ke uzohlala ukuba zihlanzwe, ukuze kuhlale kancane okwe wakwazi ukukhipha ungqimba elilandelayo kapende. abaculi abanolwazi nekhono "phala" ukukhanya ukhohliwe ngensingo ezivamile, kodwa kwenziwa ngokucophelela, ukususa ungqimba ezondile iphepha ngangokunokwenzeka. By the way, iphepha ukudweba, ipensela ezinemibala kungcono ukuthatha aminyene ngokwanele. Lowo kuvame kwenteka albhamu zezingane ngomdwebo, asifanele ngoba mncane, futhi nje ngeke ukugcina imithwalo esindayo. Inketho engcono - iphepha iyashintsha iyaphupha ibe.